हेरी पॉटरसँग पढाई3मिल्दोको लागि हिज्जे: पजलहरू र जादू | Androidsis
ह्यारी पॉटर: पजल र मेजिक भीड विधामा पुग्न आउँछन् क्यान्डी क्रश सागा प्रकारका खेलहरू, तर यसले ह्यारी पॉटरको आफ्नै ब्रह्माण्डको अनुभव ल्याउनको लागि राम्रोसँग गर्दछ ताकि हाम्रो औंलाहरू हाम्रो आफ्नै जादू छडी हो।
Un राम्रो समाप्त को सेट दुबै दृश्य र प्राविधिक र गेमप्लेमा पर्याप्त सँग अन्य अन्य मेकानिकहरूको आनन्द लिन पनि। हामी अन्य «Comines in मा प्रयोग गरीरहेको भन्दा फरक छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई स्वागत गर्दछौं, यसमा आउनुहोस्!
1 प्रति स्तर उद्देश्यको साथ
2 कामहरू सही हेरी पॉटर गर्दै: पजल र जादू
3 तपाईंको मंत्र अपग्रेड गर्नुहोस्
प्रति स्तर उद्देश्यको साथ
के यसले हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्यो यो समाचार प्रस्ताव गर्न सक्ने क्षमता हो प्रत्येक तहमा हामी आफैंमा उपलब्ध नभएको अनलक गर्न बहुमूल्य पत्थरहरूको वर्ग मिलाउन आफैंलाई बाध्य पार्नु पर्छ।
त्यो हो, त्यो हामी यसले चीजहरू अलि गाह्रो बनाउँदैछ र यी "खेल 3" खेलहरूमा यो विरलै हुन्छ। यदि हामीले यसलाई थप्यौं कि हामी एक हेरी पॉटर गेमको सामना गरिरहेका छौं, यससँग गोल खेल भन्दा बढी सिक्नको लागि पर्याप्त तत्वहरू छन्, र यसले निश्चित रूपमा धेरैको ध्यान आकर्षण गर्दछ; ती सबैमा जो राजाका हजारौं स्तरहरू समाप्त गरिसकेका छन्।
जस्तो कि हामीले त्यस हुटमा पनि औंल्याउनु पर्छ कि हामी ह्यारी पॉटर सागाको कथाको अंश बाँच्न सक्छौं र त्यो पक्कै हो जे के रोलिंगको पुस्तकका अनुयायीहरूलाई सम्झनुहोस्। ह्यारी, रोन र हर्मियोनको ट्रोलसँगको लडाई ती क्षणहरू मध्ये एक हो जुन हामीले तपाईंलाई बताउछौं र त्यो धेरै इन्टिजरहरू जोड्न सक्छ जोडदार हडतालको अनुभवमा।
कामहरू सही हेरी पॉटर गर्दै: पजल र जादू
र जब हामी मोबाईलमा वर्षौंदेखि हामीसँग आएका यस प्रकारका म्याच are खेलहरूको अगाडि हुन थकित छौं। यो सत्य हो कि यहाँ Zynga आफ्नो होमवर्क गरेको छ हामीलाई ल्याउने सबै जादू जुन यस प्रकारको गाथाले उत्पन्न गर्दछ।
त्यो हो, भित्र यी सबै संयोजनहरूमा हामीहरूको जादुई प्रभावहरू हुनेछन् तपाइँको अर्को मा जान चाहानुहुन्छ खेल को लागी सुशोभित हुनेछ। यो भन्नु हुँदैन कि हामी आफ्नै अवतार सिर्जना गर्न सक्छौं वा आफ्नै भित्ता छनौट गर्न सक्छौं; टिप्पणी गर्नुहोस् कि हामीसँग हाम्रो अवतार अनुकूलित गर्न धेरै सम्भावनाहरू छन्, त्यसैले हामी तपाईंलाई हाँस्नको लागि अनियमित बटन तान्ने सुझाव दिन्छौं।
साथै हामी नयाँ कलाकृति कार्डहरू प्राप्त गर्नेछौं, स्थानहरू र ह्यारी पॉटरको संसारको रेसिटीहरू। त्यसोभए सबै कुरा कढ़ाई भन्दा बढि हो कि हामी हेडलांगलाई खेलमा हाम फाल्यौं कि यदि यसको अर्को नाम छ भने त्यसले यति धेरै पुल नराख्न सक्छ, तर हामी सत्य हुौं, तिनीहरूले यसको प्रयोग गरे।
तपाईंको मंत्र अपग्रेड गर्नुहोस्
शक्ति संग कि यसको मतलब हाम्रो औंलाहरु को एक जादू को छडी मा रूपान्तरण हामी आफैंमा हेरी पॉटर: पजल र जादूमा मन्त्र सुधार गर्न सक्षम हुने क्षमताको साथ भेट्टाउने छौं। तथ्य यो कि Zynge द्वारा प्रकाशित छ पनि यो नयाँ सामग्री प्राप्त गर्न सक्षम हुनुको स्थितिमा राख्छ जुन हामीलाई यो खेलको लागि समयको लागि स्थापित भएको छ; यो पहिले नै राजाको साथ हुन्छ लाखौं मानिस एक दिन मा आफ्नो खेल खेल्छन् भनेर जान्दै.
प्राविधिक यो एक मिल्दो खेल हुन कढ़ाई र नेत्रहीन हामी एक खेल चिन्तन गर्न पनि छौं जुन पहिलो सेकेन्डबाट खेल्ने अनुमति छ। धेरै उज्ज्वल र colors्गहरू, प्रभावहरू जताततै र सयौं संयोजनहरू रमाइलो खेल अनुभव भन्दा बढि उत्पन्न गर्न, त्यसैले हामी सबै खेलको साथ जान्छौं जुन अनुयायीहरूको धेरै पाउँदछ।
ह्यारी पॉटर: पजल र मेजिक एन्ड्रोइडमा आउँदछ दर्जनौं भिडियो गेम स्टुडियोहरू द्वारा कुचलिए भन्दा बढि कोटीमा प्रयास समर्पण गर्ने कठिनाईको साथ। यो धेरै राम्रो गर्छ, त्यसैले यसलाई संभवतः महिनाको क्याजुअल बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
संयोजनका फ्यानहरूका लागि, हेरी पॉटरसँगको अत्यावश्यक चीजहरूमध्ये एक हो र दृश्य र टेक्निकलमा पछिल्लो टेक्नोलोजी। एक आश्चर्य
विराम चिह्न: 7
सबै ठाउँमा जादू
राम्रोसँग पहिलो खेलहरूमा फ्रीमियम गरियो
दृश्य रूपमा ती ग्राफिक प्रभावहरूको साथ
अर्को खेल 3, हो
ह्यारी पॉटर: पजल र जादू
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड खेलहरू » तपाईंको औंलाहरू मानौं कि तिनीहरू तपाईंको जादुई कांडामा ह्यारी पॉटर: पजलहरू र जादू
वनप्लस T टी 8 65 डब्लू फास्ट चार्जिंग र डुअल सेल ब्याट्रीको साथ आउँनेछ